Blockchain News 11 January 2018 - Blockchain News
Blockchain News 11 January 2018
Ex-Financial regulator: M chọrọ ka m ga-tinyere na Bitcoin mgbe m gwara onye ọ bụla na-elezi anya
Kpụrụ ego regulator Bart Chilton chọrọ o nyekwara ke bitcoin na ndị ọzọ na-ewu ewu cryptocurrencies azụ mgbe ọ na-agwa onye ọ bụla na-elezi anya.
Chilton kwuru na ọ bụ ka ndị “Wild West” n'èzí usoro futures ahịa, ma kwukwara oke price fluctuations nwere ebe “mellowed si.”
Japan si Fisco ọkwa mwepụta nke cryptocurrency enweta ego
Japanese ego nnyocha ike na bitcoin mgbanwe ọrụ Fisco ka a mara ọkwa na ọ ga-ẹkedori a cryptocurrency enweta ego.
Na-abịa mgbe ndị ike agbala a bitcoin nkekọ afọ ikpeazụ, ọhụrụ kaadị ego ga-itinye ego karịa 300 nde yen ($2.66 nde) na bitcoin na ndị ọzọ na digital ego, dị ka Nikkei.
The ego na-ekwu na-akpa ụdị ke Japan.
Arizona omeiwu ịme ụgwọ na-ekwe ka ụmụ amaala na-atụ ụtụ isi na Bitcoin
A ọhụrụ ụgwọ osụk aka Arizona Sineti ga, ma ọ bụrụ na ihe ya masịrị, ka ndị mmadụ na-akwụ ụgwọ ha ala tax ụgwọ iji bitcoin ma ọ bụ ndị ọzọ cryptocurrencies.
Public ndia na-egosi na iwu - nkwado obodo Senator Warren Petersen na co-nkwado site atọ ọzọ omeiwu - e osụk maka echiche na Jan. 9. Ọ ka ebe a na-akpọ ndị Arizona Sineti Rules Committee maka inwekwu deliberation.
Dị ka ederede, ọtùtù ga-ekwe ka maka ojiji nke “a ugwo ụzọ ámá, dị ka bitcoin ma ọ bụ ndị ọzọ cryptocurrency, eji ọgbọ na-ọgbọ usoro” iji na-akwụ “tax na mmasị ọ bụla na penalties” ji gọọmenti ala.
Arizona omeiwu kwaga mma ego metụtara tech na n'oge gara aga. ikpeazụ spring, ome iwu fọrọ a na ụgwọ ahụ na-amata blockchain signatures na smart contracts dị ka nti n'okpuru ala iwu. Gov. Doug Ducey bịanyere aka ụfọdụ n'ime iwu ikpeazụ March.
U.S. Marshals ọrụ ezube Auction 3,813 bitcoins
The U.S. Marshals Service ga Auction anya 3,813 bitcoins jide na njikọ na gọọmenti etiti, Civic na nhazi mgbe. The ego dị oké ọnụ ahịa fọrọ nke nta $54 nde ugbu a ahịa.
The auction site Ngalaba nke Ikpe Ziri Ezi gị n'ụlọnga ga-ewere ọnọdụ n'oge a isii hour oge na Jan. 22. The bitcoins ga-awa maka ire na 11 nkanka, ndị kasị ibu nke ga-ebu 813 bitcoins. Sonyere na-chọrọ ka a nkwụnye ego nke $200,000, gị n'ụlọnga kwuru na nkwupụta Thursday.
US Sineti jide nzute ekwurịta cryptocurrencies
The U.S. Sineti ego ọrụ panel ga jide a ntị ọzọ ọnwa na obodo si n'elu ahịa regulators na-atụle bitcoin gburugburu ebili-akpata nchegbu ahụ ize ndụ cryptocurrencies inwe ego usoro, a onye na kpọmkwem ihe ọmụma nke okwu gwara Reuters.
Sineti Banking Committee ga-agba akaebe site Commodity Futures Trading Commission onyeisi oche Christopher Giancarlo na Securities na Exchange Commission onyeisi oche Jay Clayton n'oge February, isi iyi si.
Russia kpezie cryptocurrency ụgwọ: Naanị mma mgbanwe kwere
Russia si Ministry of Finance ga-eme ka ihe-mgbakwunye cryptocurrency legalization ụgwọ, nke ga-ekwe erekwa dị otú ahụ akụ na na ụfọdụ “ukara” mgbanwe.
Deputy Finance Minister Alexei Moiseyev gwara RNS.
The ndepụta ukara mgbanwe bụghị ma e mma, a ka na- “tụlere”.
Moiseev obi ike na-ekwusa ozi ọma adịghị chọrọ amachi nyefe nke ẹdude kaadị ego, ma na-atụ anya na-etinye “ụdị ụfọdụ nke kpuchie ".
“Ònye nwere kaadị-ego, na ihe ọ bụla ga-enwe. Ma Ịzụ na ire ga-n'ụzọ ụfọdụ etozu. The n'ozuzu echiche bụ na ọ ga-adị mkpa zụta na-ere akụ na ukara mgbanwe na a ga-akpọ ndị, nkwado iwu.”
alexey Moiseyev – Deputy Minister nke Finance
The Ministry of Finance ọkọnọ draft ụkpụrụ nke kaadị-ego na December 2017, akwụkwọ ga-osụk aka State Duma na February 2018. The Ministry ekwere na kaadị-ego a ga-atụle ihe onwunwe, bụghị ego, na Ngwuputa – ada n'okpuru definition nke azụmahịa na-eme pụrụ iche ụtụ isi.
Arkansas ọkọkpọhi mbụ Bitcoin igwe ndọrọ ego
na Arkansas’ tallest ụlọ anọdụ mbụ bitcoin igwe na steeti.
The igwe eruwo anya kemgbe November mgbe e debere na Nkuku Store na More n'ala nke 40-akụkọ Simmons Tower na ogbe ndịda Little Rock.
“M na enwetatụbeghị nza nke ụkwụ okporo ụzọ na ọ,” kwuru store manager Connie Davis.
The igwe na-ekesịpde site na Freedom Mkpụrụ ego Inc., nke nwere otu ụlọ ọrụ na nso Simmons Tower.
Chris Sweeney, ngalaba-nchoputa na onye isi oche nke Freedom Mkpụrụ ego Inc., na K.C. Surrett, president na ndị isi ego mara, kwuru na ha na-eme atụmatụ iji wụnye 10-15 ọzọ ígwè ọrụ na Northwest Arkansas, Fort Smith, Jonesboro na ndị ọzọ mepere emepe nke Arkansas.
“M na-eche na-ewu ewu otutu mmadu kwenyere na futures trading Nọsi'ike na price,” Sweeney kwuru.
“Ọ bụ dị ka ziri ezi dị ka anyị U.S. ego,” sị Duszota, a obodo Arkansas nwoke, a Bitcoin igwe ndọrọ ego ahịa bụ onye e gbara ajụjụ ọnụ ná idaha.
South Korea: No na-ezube ka tie iwu megide cryptocurrency
Izu a, ọtụtụ mainstream media outlets kọrọ na South Korean ọchịchị na-eme atụmatụ iji tie iwu megide cryptocurrency trading. Nke ahụ bụ nnọọ bụghị ikpe, dị ka ụgwọ ga-mkpa ruo nzuko mbụ tupu ya nwere ike iwere n'ime utịp.
Dị ka o mere ebe December 13 nke 2017, na South Korea Ministry na-nanị na-akwadebe a iwu na-ga-na-emechi ala ụfọdụ cryptocurrency mgbanwe. Ọ na-adịghị na-eme atụmatụ iji tie iwu megide cryptocurrency trading na obere oge.
Ọ bụrụ na ndị South Korean ọchịchị bu n'obi iji tie iwu megide cryptocurrency trading, ọ ga-mere otú on December 13, kama atọhapụ dị iche iche usoro iwu frameworks na gụnyere a machibidoro mba ọzọ trading cryptocurrencies.
CCN kpughere anọ bụ isi usoro iwu frameworks na South Korean ọchịchị na-atụ anya na-mejuputa site January 20:
– Gbochie unaccredited investors si emeso weere site ukwuu obodo cryptocurrencies.
– Gbochie nditịm usoro cryptocurrency mgbanwe site na-arụ ọrụ dị ka ada nyiwe maka unaccredited investors.
– Arịrịọ anoghi n'ulo oba na mgbanwe iji hụ underaged investors na ndị ala ọzọ nwere ike na-emeghe trading ndekọ na cryptocurrency mgbanwe.
– Nwa oge kwụsịtụ institutional investors na retail investors si etinye na cryptocurrencies.
The South Korean Ministry of Strategy na Finance pụta ìhè na ọ na-adịghị ekweta na ha amaghị na ndị Ministry of Justice.
"Anyị na-enweghị otu echiche dị ka ndị Ministry of Justice on a nwere cryptocurrency mgbanwe ban,"MSF kwuru.
O doro anya na, na cryptocurrency trading ban amaghị ka e bipụta ma ọ bụ ọbụna kwetara n'elu site South Korea Ministry of Strategy na Finance.
Blockchain News 22 January 2018
South Korea si consum ...
White House ukara: bụghị nso Bitcoin iwu
The U.S. ọchịchị ...
Binance ezube Bui ...
Previous Post:Blockchain News 10 January 2018
Next Post:Bitcoin Hardforks gịnị ka ọ bụ?
kaadị News 18.10.2018